Uzoqala kuphi ukuthuthukiswa kwe-web yami ye-SEO kusukela ekuqaleni?
Kunezindlela eziningi ezahlukene kanye nezilungiswa zokunikezwa kwekhasi le-intanethi ohlwini lwamiphumela yosesho esetshenziswa yi-Google, kanye nawo wonke amasevisi athandwayo njenge-Yahoo ne-Bing. Ngokuqondene nomsebenzi omkhulu wezokusesha, ukubheja ku-algorithm ehlelwe kahle, engakaze ivezwe noma okungenani ibonwe yizikhulu zayo. Ukucubungula ucwaningo olukhulu, ukuhlolwa okuwusizo kanye nokunye okungaqondakali okutholwe ngabanye abasebenzi bangaphambili, konke esikwaziyo kuze kube manje - i-algorithm ye-Google yokusesha i-algorithm ihilela okuthile mayelana namaphethini angu-200 okusesha, ikakhulukazi eqhutshwa isipiliyoni sokuphequlula umsebenzisi, ngokuhambisana nokugcina iphuzu labanqamuli bokusesha ukuthola i-indexing engcono.
Ngenxa yokuthi ayikho uhlelo oluqondile lokusebenza noma indlela yokufeza izinga eliphezulu lokusesha kwe-Google, kuneqhinga eliphelele futhi elizungezile ngempela lokuthuthukisa amakhasi wewebhu. Manje sekuyaziwa ngokuthi i-Search Engine Optimization (SEO). Leli gama lisho ukwenza zonke izinto ezizungeze ilitshe elilodwa - ukukhuphuka phezulu ohlwini lwamakhasi omphumela we-search engine (a. k. a. I-SERP). I-SEO iyaziwa kakhulu ngemisebenzi yayo enzima futhi echitha isikhathi esidingekayo ukwenza iwebhusayithi ezwakala kahle - ewusizo kakhulu futhi engaphezu kwesandla kuzo zonke izivakashi eziphilayo, kanye nesipiliyoni sokuphequlula kahle, esakhiwe ngokuphelele nesakhiwo sekhasi elihlanzekile futhi elikhanyayo ukuze tholwa yi-bots yokukhwabanisa.
Futhi kungenzeka ukuthi uqagele lo mbono. Ngisho nje ukuthi kulula ukushiwo kunokukwenza. Ngokuqinisekile. Kodwa, noma kunjalo, yini esingayenza mayelana nokuphakanyiswa kwe-SEO yakho yewebhu, okungenani ukuqala ukuhamba endleleni efanele? Ake sibuke kuqala lapho singakwazi khona ukuthuthukisa isikhundla sakho sewebhu nge-SEO. Lesi sikhathi sizoqala ngezinye ezisisekelo zesayithi lakho.
Cabanga ngokuqukethwe kwakho njengokungathi ukhuluma ukuze uphile abantu ngenkathi ukhumbula ukuthi amakhasi akho ewebhu atholakalayo kokubili abasebenzisi bangempela, kanye nezinjini zokusesha ngokusebenzisa amagama angukhiye noma imishwana eyinhloko. Ngaleyo ndlela, ukubhala okuqukethwe kunzima kunokuba kungase kubonakale ekuqaleni. Kuzodinga amandla amaningi ukuqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye, ukudala imibhalo ehlukene ecebile ngemishwana yegama elingukhiye, isabheka imvelo futhi ikhululekile ukufunda, kodwa ihambisa inani elikhulu lokufundisa ngesikhathi esifanayo. Cabanga nje ngakho. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi usebenzise isazi sokuqukethwe sosizo oluthile. Lokho kungaba isinqumo esenziwe kahle.
Izixhumanisi nama-Social Media
Ukwakhiwa kwesixhumanisi kungenzeka kube yinto ebaluleke kakhulu kuzo zonke izikhundla zewebhu ze-SEO. Eqinisweni, kusebenza kalula - i-Google ifuna zonke izixhumanisi, kokubili okukhomba amakhasi akho futhi iholele kuwebhusayithi yakho. Kodwa isihloko sezixhumanisi ezinhle kanye nokuxhumana okunempilo ku-Social Media kusengumuntu ongathinteka kakhulu. Zombili izinto zabo zokubala nezinga eliphezulu. Noma akukho lutho kuwo? Kufanele zonke izixhumanisi zakho zibe eziphilayo futhi zemvelo? Kuthiwani uma sisebenzisa ezinye izikripthi noma sisebenzisa izixhumanisi ezikhokhelwayo ngobuningi? Kungakhathaliseki ukuthi unganquma yini lokho, kodwa ngikholelwa ukuthi noma yikuphi ukuhlukunyezwa noma ukuxhaphaza kuzoba nokuphela kwesimo se-SERPs, ngakho-ke ukwenza yonke imizamo yethu ekukhusheni kwe-SEO ukuvuselelwa kalula kalula Source .